🥇 ▷ Samsung: Rarid deg deg ah oo aan fiicnayn marka Xusuusin 10 laga yaabo inuu kujiro kaydiyaha Samsung ee asalka ah ✅
Samsung: Rarid deg deg ah oo aan fiicnayn marka Xusuusin 10 laga yaabo inuu kujiro kaydiyaha Samsung ee asalka ah
Qalabka cusub ee loo yaqaan ‘Galaxy Note 10’ waxaa si dhakhso leh loogu xukumi karaa 45 watts. Si kastaba ha noqotee, waxa loo baahan yahay xamuul dheeri ah, oo aan lagu darin sidaas darteedna waa inaad iibsataa dheeraad ah. Xitaa kuwa horey u lahaa baytarro leh waxqabadyo u dhigma malaha ma awoodi doonaan inay ka fogaadaan iibsashada haddii ay yihiin Xusuusin 10 ayaa jeclaan lahaa inay ku xareeyaan xawaare buuxa.
Telefoonada cusub ee Taxanaha Galaxy-Note-10 waxaa lagu soo oogi karaa xawaare sare oo qaali ah oo ka badan ku dhawaad ​​dhammaan taleefannadii Samsung ee hore. Xitaa 25W fiilooyinka korantada ah waxay cadeeyeen inay xitaa ka dhakhso badan yihiin tijaabinta dhabta ah marka loo eego xawaaraha 30P watt ee OnePlus 7 Pro. Xusuus-qorka 10+ ayaa qaadanaya 65 daqiiqo oo keliya si uu si buuxda ugula wareego cawiyaha 25W ee ku jira sanduuqa. Xusuus-qorka 10+ wuxuu kaloo taageerayaa ku dallacsiinta 45 watts, si kaydinta tamarta aaladda ay xitaa si dhakhso leh u buuxiso. Si kastaba ha noqotee, arrinta ayaa haysata, maxaa yeelay Samsung ma bixiso khidmadda loo baahan yahay marka la eego gaarsiinta. Si kastaba ha noqotee, waxaad ku iibsan kartaa 49.90 euro sida qalab ikhtiyaar ah. Dallacayaasha kale ee USB-C ee aad horey u laheyd waxaa laga yaabaa inaysan la shaqeyn aaladda. Waqtiga xaadirka ah, Charger madow ee ku yaal Dukaanka Samsung ee Jarmalka ayaa la iibiyaa, caddaanka ayaa horay loo sii amri karaa waana inay ahaataa – 15.8. – ka dibna la keenay 29-kii Ogosto.
Jaangooyada soo dalacaya ayaa ah caarada miisaanka
Sida Sida blog-ga ExtremeTech uu sharraxayo, Samsung’s char-45-watt charger waxay adeegsaneysaa tikniyoolajiyad loo yaqaan ‘Programmable Power Supply (PPS)’, oo adeegsanaysa korantada doorsoomayaasha iyo kuwa taagan ee taagan si ay u gaaraan xawaaraha ugu sarreeya ee ku dallaca. Dambeyaasha kale badankood waxay la shaqeeyaan koronto go’an, qiyaastii 5 volts, 9 volts ama 15 volts, marka waxaad kaliya u baahan tahay inaad la kulanto baahiyaha gaar ah ee ku xusan Qoraalka 10+ waa kuwo iswaafajin kara.
Xaraashka EP-TA845 ee Samsung wuxuu leeyahay howlkar koronto xawaare leh oo leh 45 watts to the Galaxy Note 10 si dhaqso loogu dallaco. | (c) Samsung / Areamobile
Dallaaliyeyaasha kale ee adeegsanaya isla USB PD PD (Power Delivery Power) qasab ma ahan inay taageeraan PPS. Tani waxay ka dhigan tahay iibsashada wax-ku-iibinta qaybta saddexaad ee asal ahaan taageerta 45 watts ee xaashiyaha warqadda ma dammaanad-qaadayo in Xusuusin 10 / Xusuusin 10+ sidaa darteed waxaad runtii ku dallaci kartaa xawaare buuxa. Saamiluhu wuxuu u baahnaa inuu ka caawiyo PPS bilowga.
Tusaale ahaan, haddii aad leedahay koronto sida “Anker Powerport II”, oo afuuf kara ilaa 49.5 watts, kuma fiicna inaad ku tiirsanaato, sidaa darteed sidoo kale Xusuusnow 10 ++ soon. Isku mid ayaa lagu dabaqayaa kiciyaasha kale ee saddexaad ee aan taageerin heerka PPS (USB PD 3.0). Marka waxaad ku jirtaa dhinaca nabdoon kaliya haddii aad leedahay 50-euro asalka Samsung 45-watt charger aaladdaada NoteBuy -10. Ugu yaraan haddii xaraashka 25-watt ku jira uusan ku filneyn, maxaa yeelay dhakhso ma ahan.
Xigasho: ExtremeTech, BGR oo loo maro Samsung Store